Advertising Rates | TradingMyanmar Online Classified Website Portal
TradingMyanmar.com Sponsor ad ကြော်ငြာ ဈေးနှုန်းများ
ဘေးတန်း လေးထောင့်ကွက် ကြော်ငြာ(Standard)
သင့်ကြော်ငြာအား စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဘေးတန်းတွင် မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ (အပိုဝန်ဆောင်မှုအနေ ဖြင့် သင့်ကြော်ငြာအား ကြော်ငြာပုံ သီးသန့်အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ထိုကြော်ငြာအား နှိပ်လိုက်ပါက သင့်ဝက်ဆိုက်(website) (သို့်) သင့် Facebook Page သို့ရောက်ရှိသွားအောင် ဆောင် ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။)
သင့်ကြော်ငြာအား စာမျက်နှာတိုင်း၏ အောက်ဘက်ခြမ်းတွင် မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပြီး သင့်ကြော်ငြာတစ်ခုတည်းသာ သီးသန့်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။(အပိုဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် သင့်ကြော်ငြာအား ကြော်ငြာပုံသီးသန့်အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ထိုကြော်ငြာအား နှိပ်လိုက်ပါက သင့်ဝက်ဆိုက်(website) (သို့်) သင့် Facebook Page သို့ရောက်ရှိသွားအောင် ဆောင် ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။)
သင့်ကြော်ငြာအား စာမျက်နှာတိုင်း၏ အထင်ရှားဆုံး ထိပ်ဆုံးပိုင်းတွင် မြင်တွေ့ ရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ကြော်ငြာတစ်ခုတည်းသာသီးသန့်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။(အပိုဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် သင့်ကြော်ငြာအား ကြော်ငြာပုံသီးသန့်အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ထိုကြော်ငြာအား နှိပ်လိုက်ပါက သင့် ဝက်ဆိုက်(website) (သို့်) သင့် Facebook Page သို့ရောက်ရှိသွား အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။)
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ (၀၁) ၂၃၀၃၂၇၀, (၀၉) ၅၁၆၈၁၅၂, (၀၉) ၇၈၃၉ ၁၃၁၂၃, (၆၅) ၈၁၁၄ ၇၂၉၄ (စင်္ကာပူ)
“ မည်သည့်နဖူးစည်းကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုမဆို ခြောက်လဆက်တိုက်ကြော်ငြာပါက ၁၀% ဈေးလျော့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။”
အီးမေး (လ်) ။ ။ admin@tradingmyanmar.com
Sidebar Square Ad (ဘေးတန်း လေးထောင့်ကွက် ကြော်ငြာ) (Standard)
Single Banner Ad (သီးသန့် ကြော်ငြာ) (Premium)
Premium Top Banner Ad (သီးသန့်နဖူးစည်း ကြော်ငြာ) (Premium)
Banner Advertisement Price (per month)
Your sponsor ad will appear on the left panel of every page.(As an extra service, when customers click on your ad, it will go to your Website or your Facebook page)
Your sponsor ad will appear at the bottom of every page.(As an extra service, when customers click on your ad, it will go to your Website or your Facebook page)
Your banner ad will appear prominently at the top most of every page.(As an extra service, when customers click on your ad, it will go to your Website or your Facebook page)
“Get 10% Discount by advertising any banner ad for six months continuously”